FAQs - Shang Hai Tongke Kuyerera Technology Co, Ltd.
1. Chii chinonzi chiteshi chengarava?
Zvinoenderana nekutumira kwevatengi kune chiteshi chakatarwa, kana pasina chikumbiro chakakosha, chiteshi chekutakura iShanghai chiteshi.
2. Ndeipi nguva yekubhadhara？
30% yekubhadharisa mari neT / T, 70% T / T isati yatumirwa, kana L / C kiredhiti pakuona.
3. Ndeipi zuva rekusvitsa?
Mazuva makumi matatu- makumi matanhatu ekuburitswa kubva kufekitori mushure mekutambira dhipoziti maererano nemhando dzakasiyana dzemapombi uye zvekuwedzera.
4. Inguva yakareba sei garandi nguva?
Mwedzi gumi nesere mushure mekunge chigadzirwa chaendeswa kubva kufekitori kana mwedzi gumi nemaviri mushure mekutanga kushandisa chishandiso.
5. Kunyangwe kupa mushure-kutengesa kugadzirisa?
Tine mainjiniya ehunyanzvi ekupa kutungamira kwekumisikidza uye mushure-kutengesa mabasa ekuchengetedza.
6. Kunyangwe kupa chigadzirwa kuyedza?
Tinogona kupa akasiyana marudzi ebvunzo uye echitatu-bato bvunzo maererano nezvinodiwa nevatengi.
7.Chigadzirwa chacho chingagadziriswe here?
Tinogona gadzirisa zvigadzirwa maererano vatengi 'zvinodiwa.
8. Unopa sampuli here?
Sezvo zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa zvemuchina zvigadzirwa, isu kazhinji hatipe sampuli.
9. Ndeapi matanho epombi dzemoto?
Pombi dzemoto zvinoenderana neNFPA20 zviyero.
10. Ndeupi muyero unosangana nekemikari yako yepombi?
Zvinoenderana ANSI / API610.
11. Iwe uri fekitori kana kambani yekutengesa?
Isu tiri mugadziri, isu tine yedu fekitori, yakapasa ISO system yakasimbiswa.
12. Chii chakaiswa zvinogona kugadzirwa nezvigadzirwa zvako?
Tinogona kupa mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvinonyorera kutamisirwa mvura, Kuchenesa uye kutonhora sisitimu, Maindasitiri maitiro, Petroleum kemikari indasitiri, Kuvaka system, Kurapa kwemvura yegungwa, Basa rezvekurima, Fire kurwisa system, Sewage kurapwa.
13. Ndeapi ruzivo rwekutanga runofanira kupihwa pakubvunza kwese?
Unyanzvi, Musoro, Ruzivo rwePakati, Zvishandiso zvinodiwa, mota kana Dhiziri rinotyairwa, mota frequency. Kana yakatwasuka turbine pombi, isu tinofanirwa kuziva iyo yepazasi kureba uye kuburitsa iri pasi pechigadziko kana pamusoro pechigadziko, kana iwe pachako priming pombi, isu tinofanirwa kuziva kuyamwa Musoro ect.
14. Unogona here kukurudzira ndeupi wezvigadzirwa zvako akakodzera kuti tishandise?
Tine hunyanzvi hwehunyanzvi hwevashandi, zvinoenderana neruzivo iwe rwaunopa, zvakabatanidzwa nemamiriro chaiwo, kuti iwe urumbidze akakodzera zvakanyanya zvigadzirwa zvako.
15. Ndeapi marudzi emapombi aunayo?
16. Ndeipi gwaro iwe yaunogona kupa kune iyo quote?
Isu tinowanzopa chitaurwa chitaurwa, curve uye data sheet, kudhirowa, uye zvimwe zvinyorwa zvekuyedza zvaunoda. Kana iwe uchida makumi matatu ezviyero zvekuyedzwa kwekupupura zvichave zvakanaka, asi iwe unofanirwa kubhadhara iyo makumi matatu emubhadharo webato.